यी हुन् धनको लोभमा बिहे गर्ने बलिउडका १० हिरोइनहरु….. | Radio Jagaran
Home Entertainment यी हुन् धनको लोभमा बिहे गर्ने बलिउडका १० हिरोइनहरु…..
यी हुन् धनको लोभमा बिहे गर्ने बलिउडका १० हिरोइनहरु…..
माघ ७ गते / बुटवल
अभिनेत्री करिना कपुरले आफ्ना व्यायफ्रेन्ड शाहिद कपुरलाई धोका दिएर सैफ अलि खानसँग विवाह गरिन् । आफ्नो उमेर मिल्दो शाहिदलाई करिनाले छाड्नुको एउटा मात्रै कारण सैफ अलिसँग भएको धन थियो । करिना कपुर मात्रै होइन धनसम्पत्तिका लागि बुढा, एकल, अमिल्दो जस्तालाई पनि अंगाल्ने धेरै अभिनेत्री वलिउडमा छन् ।1
२. ऐश्वर्या राय– विश्व सुन्दरी ऐश्वर्याले आफु भन्दा सात वर्ष कान्छा अभिषेक बच्चनसँग विवाह गरिन् । अमिताभ बच्चनका छोरा अभिषेकसँग सम्पत्ति, फेम आदिले ऐश्वर्याले विवाह गरेको दावी गरिन्छ ।3
३. अमृता अरोरा– वलिउड नायिका अमृता अरोराले लामो समयको लभ अफेयरपछि शकिल लदाक नामका व्यापारीसँग विवाह गरिन । शकिलको दोस्रो विवाह अमृतासँग गरेका हुन् ।4
४. आयशा टकिया– राम्री नायिका आयशाले धनाढ्य फरहान आज्मीसँग लगन गाँठो कसिन् ।5
५. सेलिना जेट्ली– सेलिनाले दुवईका धनाढ्य पिटर हगसँग विवाह गरिन् । पिटरसँग भएको सम्पत्तिले सेलिनालाई आकर्षित गरेको थियो ।6
७ . जुही चावला– कुनै बेलाकी मिस इन्डिया तथा चल्तिकी हिरोइन जुही चावलाले बाबु उमेरको विदुरसँग पैसाकै लागि विवाह गरिन् । धनाढ्य जय मेहटासँग सन १९९५ मा जुहीले विवाह गरेकी हुन् ।8
८. शिल्पा सेट्टी– शिल्पा सेट्टीको सुन्दरताले वलिउडका नायकहरुलाई नै आकर्षित गथ्र्यो । तर उनले बेलायती व्यापारी राज कुन्द्रासँग विवाह गरिन् । उनीसँग विवाह गरेपछि कुन्द्राको सम्पत्तिको बलमा आइपिएलमा शिल्पाले आफ्नै टिम बनाइन् ।9
९. श्रीदेवी– आफ्नो जमानाकी चल्तिकी हिरोइन श्रीदेवीले अंकल उमेरका बोनी कपुरसँग विवाह गरिन् । बोनी कपुर फिल्म निर्देशक, निर्माता र पैसावाल हुन् । उनीहरुको जोडीलाई कसैले पनि सुहाएको भन्दैनन् । तर धनका अगाडि कसको के लाग्यो र ?10
१०. विद्या बालन– डर्टी पिक्चर हिरोइन विद्या बालनको माग अहिले पनि बलिउडमा छ । तर यीनले शिद्धार्थ रोय कपुरसँग विवाह गरिन् । कपुर व्यापारी तथा फिल्म निर्माता हुन् ।